Ezinye izindlela ezihamba phambili ze-Cable TV 2020 - Sika intambo futhi ungalokothi ukhokhe - Ezokuzijabulisa
Ezinye izindlela ezihamba phambili ze-Cable TV 2020 - Sika i-Cord Namuhla
Lapho sicabanga ngokusakaza amavidiyo nochungechunge, i-Cable Tv akuyona ukuphela kwendlela yokusakaza. Sinezindawo eziningi zokusakaza ezingabizi njenge-cable tv. Ngaphezu kwalokho, i-cable tv iza nemikhawulo ethile futhi ayisivumeli ukuthi sisakaze sisuka noma yikuphi. Ngakho-ke, uma nawe ufuna ukusika intambo ye-cable tv futhi ubheke ezinye izindlela ezingcono zokusakaza amavidiyo akho, khona-ke usendaweni efanele.
Masibe ngokoqobo; lapha sizokhombisa ezinye izindlela zokusebenzisa sakaza imibukiso yakho ku-inthanethi . Ingxenye enhle kakhulu ukuthi awunamathele ngoba ungafinyelela kulawa masayithi kusuka noma kuphi nakunoma imaphi amadivayisi.
Ezinye izindlela ezihamba phambili ze-Cable TV:
IHulu iyindlela eshibhile futhi engcono kunazo zonke yekhebula le-tv. Leli sayithi likuvumela ukuthi ubuke ama-movie, uchungechunge lwangempela lwe-Hulu, nemibukiso yamanje ngo- $ 6 nje ngenyanga. Ungazijabulela lezi zinsizakalo ezingabizi ngaphandle kokuthi uvuselele inguqulo yezentengiso ngezici ezingcono.
Kule nguqulo engabizi, ungathola ama-hick-ups wezikhangiso eziphindaphindwayo. Kepha uma ulungile ngalokho, awudingi ukuthuthukela enguqulweni yezentengiso yezinsizakalo ezingenazo izikhangiso futhi ukhokhe idola elengeziwe.
Kanye namavidiyo nemibukiso, leli sayithi liphinde linikeze izindaba ze-ABC bukhoma ngokubhaliswa okufunwayo mahhala. Ngaphezu kwalokho, futhi ungajabulela isivivinyo samahhala sezinsuku ezingama-30 njengomuntu oqalayo.
Isaphulelo Somfundi seHulu
Uma kukhulunywa ngokuthola enye indlela engcono kune-cable tv, iNetflix iwukuzitika ngokweqile. Lapha, ngo- $ 9 kuya ku-16 ngenyanga, ungabuka uchungechunge lwakho lwe-Netflix, amavidiyo, nemibukiso yakamuva. Ukutholakala kalula kokunikezwa yiNetflix akunakuhlulwa.
Akukuhle ngoba ungasakaza imibukiso yakho ngaphandle kwezikhangiso zentengiso. Amadivayisi amaningi kulezi zinsuku alayishe izinhlelo zokusebenza ze-Netflix kuqala. Ngakho-ke, konke okumele ukwenze ukuthuthukela kuhlelo olujwayelekile lwe-premium futhi ujabulele imibukiso yakho noma nini nanoma kuphi.
Thola isaphulelo sabafundi seNetflix
3. I-Amazon Prime Video
I-Amazon, hhayi nje indawo oyothenga kuyo manje, manje yisayithi elihle kakhulu lokusakaza lapho ungabuka khona amavidiyo futhi ujabulele ubulungu obuyinhloko.
Yebo, ubulungu obuphambili be-Amazon bukunika ukufinyelela ochungechungeni lwakamuva lwe-inthanethi lwe-inthanethi, imibukiso, ama-movie, kanye nochungechunge lwe-TV. Ngohlelo lokubhalisa nyangazonke elingu- $ 13, ungajabulela ukulethwa okusheshayo, amadili wakamuva, futhi namavidiyo akamuva.
Ngaphezu kwalokho, ungayijabulela Isivivinyo samahhala se-Amazon Prime Video izinsuku ezingama-30 ngaphambi kokukhetha izinsizakalo. Futhi lokho kuzoba kuhle ukujabulela isizini yohlelo lwakho oluthandayo.
Thola i-Amazon Prime Student Discount
3.I-HBO Manje, i-Starz ne-Showtime
Kuqala ngo- $ 15 ngenyanga, i-HBO Starz ne-Showtime zinikela ngezinsizakalo zokusakaza ividiyo. Lapha, ungabuka imibukiso yakamuva ye-FBO, amavidiyo, ezemidlalo, namanye amasevisi. Ingxenye ehamba phambili iyatholakala kuzo zonke izinhlelo zokusebenza, kufaka phakathi iRoku, Hulu, Amazon Prime, ne-Apple Tv.
Ungajabulela isivivinyo samahhala sezinsuku eziyisikhombisa lapho ubhalisela i-akhawunti okokuqala futhi ujabulele imibukiso yokuqala ye-HBO.
Faka isicelo se-HBO Now Student Discount
Ingabe ufuna enye indlela engcono kune-cable tv? Bese usakaza amavidiyo ku-Disney. Yebo, iDisney! Kulezi zinsuku, ungasakaza noma yini esizeni seDisney ngecebo elishibhile lama- $ 7 ngenyanga. Lokhu kunengqondo ukusika intambo yakho yekhebula bese ushintshela kule ndlela engcono kakhulu yokusakaza imibukiso yakho oyithandayo.
Kusuka kukhathalogi yeDisney, kufaka phakathi i-Star Wars, i-geographic kazwelonke kuya ku-Pstrong, lapha uthola konke okudingeka ukubuke. Ungakhohlwa ukujabulela inqwaba yezilingo zamahhala, izinsizakalo ze-Hulu, ne-ESPN +.
Ngaphezu kwalokho, ungayijabulela imidlalo oyithandayo nalapha. Ngokungena ngemvume kusayithi, awutholi ithuba lokulahlekelwa yimibukiso yakho.
Bhalisela i-Disney Plus Free Trial
5. Indwayimane TV
Ku-Sling, awudingi ukulinda ukusakaza umbukiso wakho. Ngoba lapha ungabuka imibukiso bukhoma. Ngokwengeziwe, ungajabulela iziteshi ezibukhoma ezingamashumi amathathu kule ndawo yokusakaza, kufaka phakathi i-ESPN, CNN, AMC, HGTV, ESPN2, neDisney.
Ingxenye enhle kunazo zonke ongayithola ngaleli hlelo lanyanga zonke lama- $ 25. Uma ungumthandi wezemidlalo, ngokukhokha enye i- $ 5, ungayijabulela nemidlalo. A khulula kwecala izinsuku eziyisikhombisa ukwelashwa okunoshukela phezu kwephakeji labathandi bama-movie.
Ingabe unesithukuthezi ngokulahlekelwa yimibukiso yakho ngenxa ye-cable tv? Ake siyinqume nje bese sizama lolu hlelo lokusebenza lwePhilo. Ngokufaka lolu hlelo lokusebenza, ungajabulela iziteshi ezingama-58 ezaziwa kakhulu: I-TLC, i-AMC, uNick, nezinye eziningi.
Ungasakaza uPhilo kumadivayisi amathathu noma ngaphezulu mahhala. Ngakho-ke, njalo ngoLwesihlanu ebusuku, ungabuka i-movie yakho oyithandayo futhi ujabulele umzuzu nabangani nabathandekayo.
7. Hulu Phila
Uma uhlanya ngemibukiso ye-Hulu, zama i-Hulu bukhoma. Isayithi lizokunikeza ukufinyelela kwimidlalo yoqobo ye-Hulu, ezemidlalo, izindaba, ama-movie nochungechunge lwewebhu. Ngaphandle kwalokho, unga jabulela imibukiso ebukhoma futhi urekhode imibukiso yakho bukhoma ozoyibuka kamuva.
Uma ungahlatshwa umxhwele, bese uzama isivivinyo samahhala sezinsuku eziyisikhombisa ngaphambi kokufinyelela kunguqulo ye-premium. Siyakuqinisekisa ngokuthola iphakethe le-premium.
8. I-Apple TV +
Nansi enye insiza yokusakaza ehamba phambili ngesimo se-Apple TV +. NjengeNetflix ne-Amazon Prime, i-Apple TV + ibuye ikhombise uchungechunge lwabo lwewebhu nama-movie akamuva. Uzomangala ukwazi ukuthi inkampani ephethe i-tech inikeza le sayithi yokusakaza enezici eziningi ze- $ 5 nje ngenyanga.
Ngaphezu kwakho konke, uma unedivayisi ye-Apple, lokho kukuhle kuwe ngoba uthola lokhu unyaka wonke wamahhala.
Isaphulelo se-Apple Music Student (2020)
Uma ufuna ukujabulela ama-movie wakho ayintandokazi, imibukiso, nochungechunge lwewebhu mahhala, zama i-YouTube. Lapha izinkulungwane zamavidiyo, imibukiso, kanye nochungechunge kuhamba njalo nsuku zonke. Ngakho-ke, ungakujabulela ukuwabuka mahhala ku-YouTube. Ungabhalisela i- Isaphulelo se-YouTube Premium Student .
Uma ukhathala nge-cable tv futhi ufuna ukuyinqamula, uzizwa unenhlanhla yokuba ne-HDTV Antenna. Leli sayithi likunikeza ngezinsizakalo ezingcono zokusakaza ividiyo ezinhlelweni ezingabizi. Yize intengo yamapulani ingahluka, ungajabulela izithombe nama-movie wekhwalithi ye-HD lapha.
Ngakho-ke, lokho okulindile kumane nje kungukunqunywa kwe-cable tv futhi ujabulele amavidiyo kulawa masayithi. Manje unenqwaba yezinketho zokusakaza ezenza umqondo omkhulu ekusakazeni imibukiso eku-inthanethi ngamanani ashibhile. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi awudingi ukulinda ukuya ekhaya ngoba ungafinyelela kulawa masayithi kumadivayisi wakho weselula.
I-Youtube TV vs Hulu Live
Izindlela ezihamba phambili zeWhatsApp Okufanele Uzame (2020)
Ama-Movie ne-TV kaJake Gyllenhaal - Kufanele Ubuke!